Abahlanganisi abaphezulu be-Shear kuMkhiqizi Wokudla Kwezilwane - iHielscher Ultrasound Technology
Ukudla kwezilwane ezifuywayo kudinga imishini yokuxuba ephezulu ye-shear ephezulu yokupheka ukuze kulungiswe ukuxutshwa okuxubile kwezithako ezahlukahlukene. Abahlanganisi be-Ultrasonic bahlinzeka ngemikhosi ye-shear ephakeme ephezulu engacubungula amaslayidi we-viscous kakhulu nezinhlama. Ngaphezu kwalokho, abaxube be-ultrasonic benzelwa ukukhiqiza ama-nano-emulsions ezinzile futhi kukhishwe izithako ezisebenzayo ezintweni ezingavuthiwe. I-Ultrasonication ikusiza ukuba wenze ukudla kwezilwane ezihamba kahle, okunempilo futhi okuzinza emashalofini ngenkathi kusetshenziswa ezomnotho nokusebenziseka kalula.
Ukukhiqizwa Kwezilwane Zokudla
Uhla lomkhiqizo ekudleni kwezilwane ezifuywayo luyakhula ngokushesha njengoba lubhekela ekuthini kwesidingo esikhulayo sabaninizilwane ezifuywayo ezifuna okungcono kakhulu kwabalingani bazo abanezinyawo ezine. Ngenkathi ekudleni kwezilwane ezifuywayo ezedlule bekuvame ukuba yinyama eyenziwe nge-pelletised noma ekheniwe, indawo yanamuhla yezilwane ezifuywayo ihlanganisa zonke izinhlobo zezinhlobo kubandakanya nokudla okukhethekile kwezilwane ezifuywayo zezilwane ezifuywayo ezigabeni zokuphila ezahlukahlukene, amazinga omsebenzi kanye nezidingo ezikhethekile.
Ukukhethwa kokudla kwezilwane zasekhaya ezisezingeni eliphakeme kufaka i-kibble eyomile, ukudla okumanzi, ukudla okunomswakama, ukugxila komisiwe, ukudla okuqinisiwe kwezilwane, umhluzi, amabele, ukudla njll. Okungeyona i-GMO, i-gluten-free, akukho okulondoloziwe, okulebula elihlanzekile noma izinhlobo eziphilayo. Izithasiselo zenzelwe ngqo izilwane ukuze zihlangabezane nezidingo zazo ezikhethekile zamavithamini, amaminerali, ama-antioxidants kanye nama-amino acid.
Ukudla kwezilwane wanamuhla akudingeki ukuthi kube nokulinganisela okunempilo, ukuze izidingo zokudla kwezilwane zihlangatshezwe yizithako zokwenziwa. Ukudla kwezilwane zasekhaya kufanele futhi kuphendule kulokho okulindelwe ngabaninizilwane ezibandakanya ukufezekisa / ukubukeka okuhle, ukuthambekela kokuziphatha, ubungani bemvelo, ukugcwaliseka kwelebula noma okuhlanzekile.
Izithako ezejwayelekile zifaka inyama (isib. Inyama yenkomo, inkukhu, imvu, imbuzi, inhlanzi), amaqanda, imifino, izigaxa, okusanhlamvu, amavithamini, amaminerali kanye nama-antioxidants. I-Ultrasonic high-shear mixer inikezela amandla adingekayo wokuxuba izithako ezahlukahlukene zibe yisilayidi noma inhlama, engakhishwa ekuqhutshweni osezansi komfula ibe ama-kibbles.
Funda kabanzi mayelana nabahlanganisi be-ultrasonic abaphezulu!
Izingxube ze-Ultrasonic zisetshenziselwa futhi ukugxilisa izigaba zamanzi namafutha zibe yi-nano-emulsions ezinzile. Ama-nano-emulsions e-Ultrasonic asetshenziselwa ukubethela izinto eziwusizo njengamavithamini, amaminerali nama-antioxidants ukuze athole i-bioavailability ephakeme. Njengobuchwepheshe bokucubungula obungewona obushisayo, ukuxubeka kwe-ultrasonic kanye ne-emulsation akukuhlazisi amakhompiyutha athinta ukushisa ngokushisa.
Funda kabanzi mayelana nokwenziwa kwezithasiselo usebenzisa i-ultrasonication!
Ukuhlanganiswa kwe-Ultrasonic High-Shear kokudla kwezilwane zasekhaya
Izithako ezixubile eziphakeme ze-Ultrasonic zisetshenziswa kabanzi ezimbonini ezahlukahlukene ukukhiqiza ukudla & iziphuzo, amakhemisi, amakhambi ezokwelapha, izithasiselo zokudla okunempilo kanye (phyto-) namakhemikhali. Abahlanganisi be-Ultrasonic ephezulu-shear bangaqaliswa kwizigaba ezahlukahlukene zokudla kwezilwane nokukhiqizwa kwezengezo zezilwane ukuze kuthuthukiswe ukucutshungulwa kanye nomkhiqizo.
Sebenzisa abahlanganisi be-Ultrasonic
Ukugcwala Okugcwele Kwezinqwaba
Tank nge-8kW ultrasonicators kanye ne-agitator
Abahlanganisi be-Ultrasonic ephezulu basebenzisa umgomo ofanayo neminye imishini esetshenziselwa ukuxubungula yezimboni, isb. Ama-high-shear blade mixers, ama-multi-shaft mixers, ama-colloid mill, ama-homogenizer anegalelo eliphezulu, kanye ne-blade agitators. Amaphrosesa we-Ultrasonic aphezulu-shear asetshenziswa kaningi njengabahlanganisi abathembekile nabanamandla ukusabalalisa nezinhlayiya zamamilimitha, ukukhipha izigaba kawoyela nezamanzi, ukumanzisa izimpuphu ezimanzi nezincibilikisi kanye nokukhiqiza amasaladi angenamikhawulo, inhlama noma izimbotshana. Abahlanganisi be-Ultrasonic ephezulu-shear badlulisa amabutho amakhulu e-shear ngokusebenzisa i-probe ye-ultrasonic (eyaziwa nangokuthi yi-sonotrode) esitsheni esixubayo, njengethangi le-batch noma i-flow cell reaction. Isiprofetho sesihlanganisi se-ultrasonic siyanyakazisa ku-ketshezi esikhungweni esiphakeme kakhulu kanye nama-amplopes ngaleyo ndlela sidale ama-bubble e-cavitation we-ultrasonic ophakathi nendawo. Ukuwa kwamabhamuza we-cavitation kuholela emandleni e-shear anamandla, okuphazamisa futhi kuphule amaconsi, ama-agglomerates, ama-aggregates, ngisho nezinhlayiya eziyinhloko. Njengoba i-ultrasonic cavitation ikhiqiza ukusakaza okuphezulu kwe-velocity cavitational okufika ku-1000km / h, ukusakazwa kwe-cavitational liquid kusheshisa izinhlayiya. Lapho izinhlayiya ezisheshayo zishayisana, isenzo leso siyimidiya yokugaya. Njengomphumela, izinhlayiya ezingqubuzanayo ziyaqhekeka futhi zincishiswa zibe usayizi we-micron- noma we-nano-size. Ensimini ye-ultrasonic cavitation, izingcindezi zishintshana ngokushesha nangokuphindaphindiwe phakathi kwe-vacuum kuze kufike ku-1000bar. Isixhumi esijikelezayo esinama-4 mixer blade sizodinga ukusebenza ku-300,000 RPM ukufezekisa imvamisa efanayo yokushintsha imijikelezo yengcindezi. Abahlanganisi abajwayelekile bomjikelezo nabahlanganisi be-rotor-stator abadali inani elikhulu le-cavitation ngenxa yokunciphisa kwabo ijubane. Amandla amakhulu we-cavitation enza ama-processor we-ultrasonic ephezulu-shear abe imishini efanelekile yokucela izinhlelo zokuxuba.
Kungani abaxube be-Ultrasonic High-Shear?
I-Homogenisation ye-Solid-Liquid Slurries
Ukugcizelelwa Kwe-Kibble Coatings
Ukufafazwa Kwezembozo ZaseKibble
Ukulungiselela Ukuhlanganisa Okusobala
Isizinda se-Bioactive and Flavors
I-Emulsion / Ukuhlakazeka ngaphambi kwe-Extruder
I-pasteurization / Sterilization
I-Degassing / De-Aeration
I I-UIP4000hdT, ingxubevange enamandla ye-4000watts ehlanganisa izimboni eziphakeme zezimboni ze-homogenization
Kungani ama-Ultrasonic High-Shear Processors wokukhiqizwa kokudla kwezilwane?
Ukusebenza kahle kakhulu, okuthembekile, okuqinile futhi okutholakala kunoma yisiphi isayizi, i-Hielscher Ultrasonics 'high-shear mixer isisombululo sohlelo lwakho lokusebenza lokuxubha. Izingxube eziphezulu ze-Ultrasonic zingafakwa njengama-batch mixers / tank agitators noma njengezinhlelo eziqhubekayo zokugeleza ngokusebenzisa ukucutshungulwa kwangaphakathi. Zonke izihlanganisi ze-Hielscher Ultrasonics 'high-shear zenziwa kusuka kunsimbi ephezulu yensimbi ne-titanium. Zisetshenziswa ezindaweni zokucubungula ezivunyelwe yi-FDA ekudleni & isiphuzo, ubisi, inyama, izinkukhu, ukwenziwa kwemithi, kanye nokwenza izimonyo.
Kungani abahlanganisi be-Ultrasonic High-Shear?
Ukucubungula okungasebenzisi mafutha
OkweBatch noma Okusemgqeni
Akunazinkinga ngokugxila okuphezulu okuqinile
Akunama-nozzles / akukho okuxhunywayo
Akukho maphakathi wokugaya (okusho ubuhlalu) odingekayo
Izinzuzo ze-High-Performance Ultrasonic Mixers
Abaxube be-shear high shear bakha amandla amakhulu okushefa, anomthelela odingekayo ezinhlayiyini ezifana nokuqina, amaconsi, amakristalu, kanye nemicu ukuze zikwehlise ngosayizi ohlosiwe, ongaba usayizi we-micron noma we-nano. Umphumela wokunciphisa usayizi wezinhlayiyana ungalungiswa ngokunembile ngokushuna kwamandla we-ultrasonic.
Ukusingatha kalula ama-viscosities aphezulu nemithwalo ephezulu eqinile, abahlanganisi abaphakathi kwe-shear ephezulu ye-shear bakulungele ukucubungula imikhiqizo yokunameka- noma yenhlama efana nokwenziwa kokudla kwesilwane ngaphambi kokukhishwa. Amandla okugunda ama-acoustic athole ukufakwa okumanzi okuphelele kwezithako ze-powder bese uwahlanganisa ngendlela efanayo ingxube.
Ngokuya ngobunzima bezinhlayiya, amapharamitha wenqubo we-ultrasonic angahle alungiswe ukuze kufinyelelwe umphumela wokuxuba owafunwayo. Uma kuqhathaniswa nezinye izindlela zokuxuba ezifana nama-high-shear blade agitators, ama-homogenizer ane-high-pressure, ama-colloid / ama-bead mixers, ama-shaft mixers nokunye. ukuntuleka kwama-nozzles ahlanganisiwe, ukusebenza okulula nokuphephile, ukulungiswa okuphansi kanye nokuqina.
Okwamanzi emulsion wamanzi / kawoyela, i-ultrasonication kuyindlela ephakeme kakhulu yokukhiqiza i-nano-emulsions ezinzile. I-Ultrasonic emulsation isetshenziselwa futhi ukufaka ama-bioactive complements afana namavithamini nama-antioxidants kuma-liposomes ama-bioavaxa kakhulu.
I-Ultrasonic flow cell Reactor ku-ultrasonic high-shear mixer I-UIP4000hdT (4kW)
I-Hielscher Ultrasonics ephezulu yokusebenza kahle ingasetyenziselwa i-batch nokuqhubeka kokugeleza ngokuqhubekayo. Ngokuya ngevolumu yenqubo yakho nokungenela kwehora, ukucubungula okungaphakathi kunganconywa. Ngenkathi kuhlangana isikhathi futhi kubasebenzi, inqubo eqhubekayo yokuxuba imigqa isebenza kahle, ishesha futhi idinga umsebenzi omncane kakhulu.
I-Ultrasonic Mixers Yazo Zonke Izidingo Zomkhiqizo
Uhla lomkhiqizo we-Hielscher Ultrasonics luhlanganisa isilinganiselo esiphelele somprosesa we-ultrasonic kusuka kuma-compact lab ultrasonicators ngaphezulu kwe-bench-top kanye nezinhlelo zokushayela kuya kubathuthukisi be-ultrasonics abasebenza ngokugcwele abanomthamo wokucubungula ukulayishwa kwamaloli ngehora. Ububanzi bomkhiqizo ogcwele busivumela ukuthi sikunikeze i-mixer ye-ultrasonic efanelekile kakhulu kumthamo wenqubo nezinhloso zakho.
Izinhlelo ze-benchtop ze-Ultrasonic zilungele ukwakha izindlela zokupheka ezintsha zezilwane ezifuywayo, ukuzama ukuqamba izinhlobo ezintsha zokunambitheka noma ukuklama izithako zezilwane ezifuywayo. Izinga le-Linear up-based based in parrimeter process process lisenza ukuthi kube lula kakhulu ukwandisa amandla okusebenza ukusuka kumanani amancane ukukhiqizwa okuthengiswayo okuphelele. Ukulinganisa phezulu kungenziwa ngokuthi kufakwe iyunithi yokuxuba i-ultrasonic enamandla kakhulu noma ukuhlanganisa ama-ultrasonicators amaningana ngokufana. Nge UIP16000 (16kW), I-Hielscher inikeza i-mixer enamandla kakhulu ye-Ultr ephezulu ephezulu yomhlaba wonke.
Amplowuji Amakhulu Wokusebenza Okuphezulu Kokuxuba
Hielscher Ultrasonics’ ama-processor ultrasonic processors angahambisa amplople ephezulu kakhulu futhi alethe amandla adingekayo wokuxuba kwezicelo ezifunwayo. Amandla afinyelela ku-200µm angaqhutshwa kalula ngokuqhubekayo ekusebenzeni kwe-24/7. Okokuphakama okuphezulu kakhulu, i-sonotrodes eyenziwe ngezifiso ye-ultrasonics iyatholakala. Ukuba namandla kwemishini yokusebenza kwe-Hielscher sika-Hielscher kuvumela ukusebenza kwe-24/7 emsebenzini osindayo nasezindaweni ezifunwayo. Lokhu kwenza ukuthi imishini yokuxuba yeHielscher ibe yithuluzi lomsebenzi elithembekile elifeza izidingo zakho zokuxubha nezokuhlanganisa.
Izinqubo ze-Ultrasonic zingalinganiswa ngokuphelele. Lokhu kusho ukuthi yonke imiphumela oyitholile usebenzisa i-lab noma i-bench-top ultrasonicator, ingalinganiswa ngokuqondile nokukhipha okufanayo kusetshenziswa ipharamitha efanayo yenqubo. Lokhu kwenza i-ultrasonication ilungele ukuthuthukiswa komkhiqizo nokuqaliswa kokulandelayo ekukhiqizeni okuthengiswayo.
Ungathenga abahlanganisi be-Hielscher ephezulu ye-shear kunoma isiphi isayizi ehlukile futhi uhlelwe kahle kuzidingo zakho zenqubo. Ukusuka ekwelapheni uketshezi ku-labaker encane kuya ekugelezeni okuqhubekayo-ngokuxubha kwama-slurries nama-pastes ezingeni lezimboni, i-Hielscher Ultrasonics inikeza umhlanganisi ofanelekayo we-shear ephezulu! Sicela uxhumane nathi – siyajabula ukukuncoma isethaphu eyi-ultrasonic mixer!